Malunga - Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co., Ltd.
I-TronHoo 3D-iNkokeli ye-3D yokuPrinta iTekhnoloji
I-TronHoo ngumvelisi ojolise kubashicileli be-3D kunye ne-3D filaments yoshicilelo. Iimveliso zeTronHoo ze-3D zisetyenziswe ngokubanzi kwimveliso ye-R & D, ukuvelisa umngundo, ishishini lezonyango, ishishini lokwakha, izixhobo kunye nezinye iinkalo. Sifumanisa isisombululo sokushicilela se-3D esilungele wena, ukuzisa itekhnoloji ye-3D yokuprinta ebomini bakho.
Amashishini aphambili eTronHoo abandakanya iiprinta ze-3D kunye ne-R & D yoshicilelo lwezinto ze-3D, ukuvelisa, ukuthengisa kunye neenkonzo zokuthengisa emva kokuthengisa, isisombululo sobuchwephesha be-3D, imfundo yoshicilelo ye-3D kunye neenkonzo zokuprinta ze-3D, njl.
Kutheni ukhetha iTronHoo?
I-TronHoo izinze kwi-shenzhen yase China. Okwangoku, iqokelele amava atyebileyo kwimodeli ye-3D kunye nesoftware yokucheba ye-3D, inkqubo yemfundo ye-STEAM yokudibanisa itekhnoloji ye-3D yedijithali, njl., Kwaye iTronHoo inamalungelo obunini obuninzi beetekhnoloji.
Indawo yokuvelisa iTronHoo ibekwe eJiangxi yase China. Ineemitha ezili-15,000 zesikwere sefektri, ezikumgangatho ophezulu zilungiswe ngokupheleleyo ulayini we-3D kwimigca yokuvelisa, iilebhu ezimbini zovavanyo lobungcali kwiimveliso ze-3D.
Kunye neqela lemveliso enobuchwephesha. Umthamo wemveliso yoshicilelo wonyaka we-3D ufikelela kwiiyunithi ezingama-200,000, kwaye amandla emveliso yonyaka yoshicilelo lwe-3D afikelela kwiitoni ezili-1,500.
I-TronHoo izama ukuzisa itekhnoloji ye-3D yokushicilela ebomini bakho, kwaye ube yinkokeli yokuyila itekhnoloji ye-3D yokuprinta!
Ubunye kunye nokusebenzisana
Ukufuna inyani kunye nokuba pragmatic
Yiza noshicilelo lwe3D
Iziko lemveliso ezikrelekrele
Imigangatho eli-10 ekumgangatho ophezulu wokuzenzekelayo kwemigca ye-3D yemigca yokuvavanywa kweelebhu
Iimveliso ze3D Umthamo wemveliso yoshicilelo wonyaka we-3D ufikelela kwiiyunithi ezingama-200,000 ngonyaka
amandla emveliso 3D yoshicilelo filaments ifikelela 1,500t.
I-TronHoo yandisa usetyenziso lweeprinta ze-3D kunye nezinto eziphathekayo
Uphumelele igama eliphezulu kumshicileli we-3D wehlabathi kunye nendawo yokuvelisa izinto.
Iziko lemveliso yeTronHoo ekrelekrele lihleli eJiangxi
Indawo yokuvelisa iTronHoo ibekwe eJiangxi yase China. Inama-15,000 eemitha zesikwere sefektri esikumgangatho wokulinganisa kunye namandla ayamangalisa.
Ukufuduswa kwekomkhulu leTronHoo
Imveliso yeR & D amandla obugcisa, ukushicilelwa kwe-3D okubandakanyeka ebaleni kuyaqhubeka nokwanda.
UTronHoo uza ngaphambili
Iitekhnoloji ezinobuchule zihlala zinamandla amakhulu kwaye ziyadubula. Le projekthi yatyhilwa kuyo yonke imiboniso kwaye yatsala umdla.
I-TronHoo ihambe ngomkhumbi
Amandla asahlumayo kwicandelo lokuvelisa ukongeza awunakuthintelwa!